Community & Society » Ebola အီဘိုလာ ဗိုင်ရက်စ် ရောဂါပိုး သတင်း – ရန်ကုန်မှာမသင်္ကာ	11
ဝက်စိုဒ် ကဖော်ပြထားကြောင်း ယင်းခရီးသယ်က (အီဘိုလာဖြစ်နေတဲ့) ဂီနီ နဲ့ လိုင်ဘဲရီးယား
ထပ်မံ ခွဲစိပ်လေ့လာနေကြောင်း၊ သတင်းရ
အလင်းဆက်(24/05/2011) says: အမငွီးးးးးး
ဇီဇီ ခင်ဇော် (15102012) says: ဟမ်မငေးးး
Yae Myae Tha Ninn says: ဝေဘာဂီမှာဆို.. သိဘူး.. ဒီနေ့ကစပြီး.. ခေါက်ဆွဲပြုတ်.. စည်သွပ်ဗူးနဲ့ပဲ မြည်းတော့မယ်… အသားနဲ့မထိမိတဲ့ အရာတွေ စဉ်းစားစားရမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: .ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ အရင်ကြောက်ဖို့ ချန်ထားပါဦးမယ်……
manawphyulay says: အီဘိုလာ တွေ့ရှိသူ သင်္ဘောသားတစ်ဦးနဲ့ သူ၏ အဖော် သုံးဦးက မတွေ့ရှိ သူတို့ ၄ ဦးသည် ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် ပို့ဆောင် ကြပ်မက်နေကြောင်း မနေ့က သတင်းမှာတော့ ကြားလိုက်ရပါတယ်။
kai says: ဒီပြဿနာမသေးပါလား…
အနှစ်၄၀၀ ရေမြုတ်စေသတည်း… လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ဒါပေမဲ့ ထိုင်း The Nation သတင်းစာမှာတော့ Ebola ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ငှက်ဖျားရောဂါပိုးရှိသူလို့ စမ်းသပ်တွေ့ရတဲ့အကြောင်း မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ထိုင်း CDC ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနကို အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ ထိုင်း CDC ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Okart ကို ကိုးကားပြီး ရေးပါတယ်။
kai says: ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် တက်ရောက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ကျန်းမာရေး အခြေအနေ တိုးတက်မှု ရှိလာ
Kyaemon says: အီဘိုလာပိုး မတွေ့ရင် ….ဝမ်းသာစရာသတင်းလို့ပြောရမှာ၊
Kyaemon says: မြန်မာတိုင်မ်း သတင်း အရ
A Myanmar man is being kept in an isolation ward in Yangon, as doctors await the result of tests that will determine whether or not he has been exposed to the Ebola virus. The 22-year-old was transported to Waibargi Hospital in North Okkalapa township upon arrival at Yangon International Airport on August 19. He had spent the previous 13 months working in Guinea and Liberia – two countries hit hardest by the ongoing Ebola outbreak, according toaMyanmar health official.
ခင် ခ says: အီဘိုလာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ အစိုးရပိုင်သတင်းကဆိုသွားတာဘဲ